China umbala ngerabha yokutyabeka iinwele zakudala ibrashi yoyilo ekhululekile yokuphatha mveliso kunye nabenzi Yongsheng
Umbala werabha wokutyabeka iinwele zakudala kunye noyilo lokuphatha kakuhle
Izinto: ABS, irabha, nenayiloni, bristles.
Umbala: Mnyama, Bomvu.… Ulwenziwo.
T153-2586T, T153-2142T, T153-2208T, T153-2562T usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Imveliso yaphambi kwexesha-- isampulu ------ isiqinisekiso-Izinto zokuthenga-Icandelo ------ inxalenye yenaliti-Umgangatho ------ uhlolo-lweCandelo ------ inxenye - Umphezulu ------ ukugqiba-Umgangatho ------ uhlolo-lweNdibano-Umgangatho ------ uhlolo-Ukupakisha.
Isiphatho sodidi kunye noyilo olwenziwe ngerabha yokuthinta ukuthamba okuthambileyo ngokulula kakhulu ukuyibamba kwaye ihlale kamnandi. Ibrashi yeenwele igqityiwe ngezinto ze-matte ukuqinisekisa ukubambelela okuqinileyo.
Iibhulashi zeenwele ezihonjiswayo zinokubekwa ngendlela eyahlukileyo, umqamelo obhetyebhetye ngeyiloni okanye i-bristles exubeneyo ayizukubamba okanye ukutsala iinwele, nayo inokuba ne-massage elungileyo. Isiseko esidityanisiweyo sikhuthaza ukuhamba kwegazi entlonzeni, ukuvelisa iinwele ezisempilweni, ukukhuthaza ukukhula kweenwele, kunye nokuchumisa iifollic zeenwele ngeoyile yendalo, ngelixa umngxunya omncinci wokungenisa umoya ukhulula uxinzelelo lomoya ukunqanda ukonakalisa isikhumba. Kuya kubakho umngxuma phezu komqamelo. Inokuvumela umoya ukuba ujikeleze kwaye unokuba nokuthanjiswa okungaphezulu.
Vent iinwele ibrashi ilungele ukusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zeenwele: intle, ityebile okanye igobile. Le mveliso ilungele wonke umntu kwaye isebenza ngokumangalisayo kwizinwele ezimanzi okanye ezomileyo. Ubungakanani obukhulu bebrashi yeenwele ezihambelana nokujika kwentloko.
Ibrashi yeenwele ezijikelezileyo zingenza amaza athambileyo okanye ii-curls, zongeza umzimba kunye nokugcwala okanye zilungelelanise kwaye zilungelelanise iinwele ezirhabaxa, ezigobileyo okanye ezi-wavy.
Unokukhetha nawuphi na umbala wesambatho serabha, umbala omnye webrashi yomngxunya okanye uyilo olwahlukileyo lombala wentloko nesiphatho. Uphawu olunye lombala lusimahla. Iphakheji yesiqhelo yibhegi yenayiloni evulekileyo. Kwakhona singakwazi ukunikela kwendawo yeplastiki, kwendawo yokuhlala iphepha, ikhadi iphepha, iingxowa opp, ibhokisi PET kunye ukubonisa.
Okulandelayo: Isinxibelelanisi samazinyo esibanzi ngesiphatho esihle
Iibhokhwe zebrashi zeenwele
Iibrashi zeenwele zeCopper
I-Metal Pin Brush yebrashi
Mini Brush yeenwele
Ibrashi yePaddle yeNtloko
Ihagu yebrashi yeenwele
Ibrashi yeenwele zehashe leenkuni
Irabha yokutyabeka iinwele ngebrashi eprintiweyo enemibala ...
UV zombane, ugqithiso lwamanzi, shinning yoshicilelo h ...